Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) - PDF
Download "Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI)"
1 Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) 2013
2 Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) Waa maxay SSI? Macaashka Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada (SSI) waa barnaamij ay dawladda dhexe maamusho oo bixiya lacag bil kasta la siiyo dadka dakhligoodu hooseeyo hanti koobana leh. SSI waxaa la siiya dadka da'doodu tahay 65 ama ka weyn, ee naafada ah da'dii ay doonaanba ha ahaadeene, oo ay ka mid yihiin caruurta. Si laguu siiyo SSI waa in aad: Dadka da'doodu tahay 65 ama ka weyn; Indhaha dam ka ah ama qeyb ahaan indhaha la'; ama Aad qabto xaalad caafimaad oo kuu diideysa in aad shaqeyso oo aan la fileyn in ay ku dhamaato ugu yaraan sanad gudhiis ama keeni karta dhimasho. Sharciyo gaar ahaa ayaa loo adeegsadaa caruurta. Macluumaad dheeraad ah, ka akhri Macaashka Caruurta Naafada Ah (Publication No SO). Imisa ayaa lagu siinayaa? Lacagta SSIda ee la bixiyo bil kasta sanadka 2013 waa mid isku mid ah waddanka oo dhan. Waa: $710 qofka kaligiis ah; ama $1,066 laba qof.
3 Dadka oo dhan lacag isku mid ah lama siiyo Waxaa laga yaabaa in lagu siiyo lacag dheeraad ah haddii aad ku nooshahay gool ku dara lacag dheeraad ah SSIda. Waxaa laga yaabaa in lacagta lagaa dhimo haddii dakhli kale ku soo galo. Halka iyo ciida aad la nooshahay ayaa saameyn ku yeelayn kara lacagta SSIda ee lagu siiyo. Sidee ayaan xaq ugu yeelanayaa SSI? Dakhligaaga Dakhliga ku soo gala waxaa ka mid noqon kara lacata ku soo gasha, macaashka Lambarkaaga Bulshada, lacagta hawlgabka, iyo alaabada kale ee qiimaha leh ee aad ka hesho meelaha kale sida cuntada iyo hoyga. Halka aad ku nooshahay waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dakhliga ku soo gala bil kasta iyo lacgta SSIda ee lagu siiyo. Gobladu waxa ay leeyihiin sharciyo kala duwan. Hantidaada Waxaa suurogal ah in lagu siiyo SSI haddii hantida (waxyaabaha ay heysato) aanuu qiimahoodu ka badneyn $2,000 halkii qof ama $3,000 labadii qof. Ma xisaabeyno wax walba oo aad leedahay marka aan go'aanka ka gaareyno in lagu siiyo SSI. Tusaale ahaan, ma xisaabeyno guriga aad leedahay haddii aad ku nooshahay ama inta badan ma xisaabeyno gaarigaaga. 3
4 Waan xisaabeynaa lacagta caddaanka ah, xisaabta bankiga iyo shahaadooyinka maalgelinta ee lacagta u dhigna. Waa waajib in aad degan tahay Mareykanka Si laguu siiyo SSI waa in aad ku noolaataa Mareykanka ama Waqooyiga jasiiradaha Islands. Haddii aadan heysan dhalashada Mareykanka, ama aad si sharci ah ku degan tahay Mareykanka, waxa aad suurogal in aad xaq u leedahay SSI. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad ka heleysaa Barnaamijka Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada (SSI) ee Dadka Aan Heysan Dhlashada Waddanka (Publication No SO). Macaashka kale Si laguu siiyo SSI, waxaa kale oo aad codsan kartaa macaashka lacagaha kale ee caddaanka ah ee aad heli karto. Haddii lagu siiyo SSI, waxa kale oo aad xaq u yeelan kartaa Barnaamijka Kabitaanka Gargaarka Nafaqada (SNAP) iyo sidoo kale Medicaid. medicaid waxa ay kaa caawineysaa bixinta kharashka dhakhtarka iyo biilka cisbitaalka, iyada oo SNAP ay kaa caawineyso bixinta cuntada. 4 (rogad)
5 Sidee loo codsadaa SSI? La xiriir Xafiiska Lambarka Bulshada si aad uga smeysato balan aad ku codsato SSI. La Xiriirka Lambarka Bulshada Macluumaad dheeraad ah iyo si aad u hesho nuqul daabacadaha aan soo saarno, fadlan soo booqo bogga internetka ama telefoonka lacag la'aanta ah, (dadka dhagaha la'a ama maqalku ku adag yahay, waxa ay wici karaan lambarka TTY, ee ). Telefoonada oo dhan waa qarsoodi Haddii aad ku hadasho afka isbaanishka, doorop 2. Luqadaha kale dooro 1, ama khadka ku jir oo iska aamusnoow inta fariinta afka ingiriisga ah ay socoto ilaa qof kula hadlo oo ka jawaabo telefoonka. Wakiilka kulka hadla ayaa kugu xiraya turjubaan kaa caawiya telefoonka. Adeegga turjubanadu waa lacag la'aan. Waxa aan ka jawwbi karnaa su'aalaha aad qabtaan 7 subaxnimo ilaa 7da fiidnimo Isniinta ilaa Jimcaha. Guud ahaan, muddo gaaban ayaad sugeysaa in laga jawaabo telefoonka haddii aad soo wacdo todobaadka gudihiisa wixii ka dambeeya talaadada. Macluumaadka waxa telefoonka ku heli kartaa 24 saac ee maalin kasta. Waxaa kale oo aan dooneynaa inaad hesho amcluumaad sax ah iyo adeeg ku raali geliya. Taas weeye sababta telefooada aad soo wacdo loo dhageysto si loo hubiyo in la idiin qabtay adeeg idin raali galiya. 5
6 Social Security Administration SSA Publication No SO You May Be Able To Get Supplemental Security Income (SSI) (Somali) January 2013
Welcome to Birmingham Women s NHS Foundation Trust
Welcome to Birmingham Women s NHS Foundation Trust Directions and Information for Patients and Visitors www.bwhct.nhs.uk This hospital has a NO SMOKING policy Welcome This leaflet has been prepared to